बाहिरबाट फर्केका श्रीमानले ए’ड्स सारेपछि, श्रीमानको र श्रीमतीको गो’प्यअ’ङ्गनै झरेपछि यस्तो बिजोग (भिडियो) – Post Patrika
काठमाडौ -संसारमा विभिन्न नयाँ रोग भित्रिरहेका छन् । व्यस्त जीवनशैली र खानपानबाट मानिसहरु दि,नानुदिन विभिन्न रोगबाट ग्रसित भइरहेका छन् ।
हामीले यौ,न सम्प,र्कबाट सर्ने एच,आई,भी र ए,ड्सको बारेमा त सुनेकै छौ र पढेका पनि छौ । हामी यौ,न स,म्पर्कबाटै लाग्ने अर्को चार ख,तरना,क रोग पनि छन्, जुन तपाइलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।नेपाली समाजमा एक पछी अर्को घ!टना आएको छ । कतिपय घ-टना जानेर हुन्छन भने कतिपय घ?टना आफुखुसील! गर्दा भुमरीमा परिने घटना हो । जीवन मानिसको लागि अति आवस्यक कुरा हो।
स्वस्थ्य जुन जिवन भएर जिउनु नै ठूलो कुरा हो ।स्वस्थ्यको लागि खेलाजी भने गर्न हुदैन । सानो ग,ल्तिले दृघकालिन रोगले ग्र,सित हुनुपर्छ । आजभोलि अनेक प्रकारका बिरामिहरु भे-टिन गरेका छन । यस्तै एचआ-ईभीले थालिएका एकै परिवारका दुवै जनाको यस्तो दर्दनाक अवस्था रहेको छ।यो खत,रा रोग लाग्दा सडकको बास भएको छ। बिरामी हुदा कसैसित कोहि कसैको हातबाट सहयोग नहुदा यस्तो अवस्था भएको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यस्तो अवस्था भैसकेपछि अब उनीहरुलाई कसले राख्ने ? कहिँ त बस्नु पर्यो भनेर अहिले उनीहरु मन्दिर छेउको खुल्ला आकाशमा बसेका छन् । यहि खुल्ला आकाशमा बस्दा पनि कतिले गा’लि गरेर यहाँ बाट हट्न भन्छन् भने कतिले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको उनीहरु बताउछन् । अब यो जोडी काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन भने साथमा पैसा पनि छैन ।
२०७२ को भूकम्पले आफ्ना सबै लग्यो अब आफन्त भन्ने पनि कोहि छैनन् त्यसैले पनि उनीहरु खुल्ला आकाशमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
बिवाह गरेको ३ दिनमै श्रीमतीले छोडेपछि श्रीमानले पि,डा सहन नसकेर चाले यस्तो क,दम (भिडियो)